Shirka Madashda wadatshiga qaran oo weli la isku afgaran la’yahay – STAR FM SOMALIA
Waxaa weli la isku afgaran la’yahay Shirka Madaxda Somalida ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho kaasi oo la doonaayo in lagu go’aamiyo nooca Doorasho ee dalka Somaliya ka dhaceysa sanadkan gudihiisa.
Madaxtooyada Somaliya Shirarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Natiijadooda waxa ay noqotay in Isfahanwaa uu ka dhaco madasha, maadaama Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada qaar ay ku adkeysanayaan in Nidaamka Hab deegaan lagu saleeyo Doorashada.
Xubno ka tirsan Beesha caalamka ayaa qayb ka ahaa Shirarka oo doonaayay inay dhex dhexaadiyaan Madaxda, hayeeshe fekerada kala duwan ee ay ku adkeysanayaan madaxda ayaa keentay in la is fahmi waayo.
Maamulka Puntland iyo Jubbaland waxa ay ku adkeysanayaan in Doorashada lagu saleeyo hab deegaan, halka Maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay doonayaan in Doorashada ay noqoto 4.5.
Hadii Shirkaan ay si toos ah ugu heshiin waayaan Madaxda Somalida ayaa taasi waxa ay noqonaysa in si toos ah shirka uu u fashilmo, maadaama Shirkaan kii ka horeeyay uu natiijo la’aan Kismaayo ku soo dhamaaday lagana soo kala dareeray.
Maanta ayaa la filayaa in Madaxda ay soo saaraan go’aankooda ugu dambeeya ee ku aadan Doorashada dalka Somaliya ka dhaceysa, maadaama Shirka maanta lasoo gaba gabeynayo.
Shacabka Somaliyed ayaa sugaya Madax iyagaba isfahmi la’ oo ku kala qaybsan aragtida ku aadan Marxalada looga gudbayo waqtiga Dowladda hada shaqeysa marka uu dhamaado.
Isfahanka waaga ka taagan Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Muqdisho ayaa Siyaasiyiinta waxa ay ku eedeynayaan inay masuul ka tahay Dowladda Somaliya oo xilli hore aanan ka sii fekerin Doorashada dalka Somaliya.